Grain and Fire Portal Kristal Ìhè Ọkpụkpụ - Imewe Mmewe
Kristal Ìhè Ọkpụkpụ
Kristal Ìhè Ọkpụkpụ Nke osisi na kristal klak, ihe ọkpụkpụ a na-eji osisi a na-ejikarị eme ihe na-ejikwa osisi Teak emeela agadi. Anyanwụ, mmiri, na mmiri ozuzo were ọtụtụ afọ, osisi wee kee ya, kee ya, kpọọ ya ọkụ ma gwụchaa n'ime arịa iji jide ọkụ ọkụ LED na iji klọọkụ quartz dịka ihe mgbasa ọkụ eke. A na-eji kristal 100% eke na-enweghị klọọkụ na-ese ihe ọ bụla ma ọ dị ihe dị ka nde 280 afọ. Ejiri ọtụtụ ụzọ eji emecha osisi gụnyere usoro Shou Sugi Ban nke iji ọkụ na-echekwa na iche na agba.
Aha oru ngo : Grain and Fire Portal, Aha ndị na-emepụta ya : Sunny Jackson, Aha onye ahịa : Sunny Jackson.
Kristal Ìhè Ọkpụkpụ Sunny Jackson Grain and Fire Portal